မျက်နှာပြင်ကုသမှု ပန်းချီ၊ ပွတ်ခြင်း။
ငါတို့ဘာလုပ်နိုင်လဲ? CNC Machining
Radial နှင့် Bending စမ်းသပ်မှုများ
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုရွေးချယ်သနည်း။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည် ပြီးပြည့်စုံသော ဒီဇိုင်းကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။
စက်ရုံစျေးနှုန်း & အရည်အသွေးအထူးကောင်းမွန်သည်။
1. ကားအလွိုင်းဘီးအနားကွပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင် 20 နှစ်ကြာအထူးပြုပါ။
2: သင့်အတွက် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ရန်အတွက် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကားအလွိုင်းဘီးအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံများကို ပံ့ပိုးပါ။
3: ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုရှာဖွေခြင်း၏အခက်အခဲကိုရှောင်ရှားရန်စျေးနှုန်းချိုသာသောအရည်အသွေးမြင့်ဝက်အူများ၊ အဆို့ရှင်များ၊ အလယ်ကွင်းများနှင့်အတူသင်္ဘောတင်ပါ။အော်ဒါအရေအတွက် များနေပါက အပိုပစ္စည်းများကို အခမဲ့ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
4.OEM ကိုလက်ခံသည်၊ သင်၏အသေးစိတ်လိုအပ်ချက်အရပြုလုပ်နိုင်သည်။
5: အရည်အသွေးနှင့် အရေအတွက်အရ စျေးနှုန်းသင့်တင့်ပါသည်။
6: Flow forming wheel သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပင်မထုတ်ကုန်များ၊ စျေးနှုန်းချိုသာသော၊ အရည်အသွေးမြင့်ပြီး စတိုင်မျိုးစုံရှိသည်။အထူးပေါ့ပါးသောအလေးချိန်၊ 18လက်မသည် 8.5kg သာရှိသည်... စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း။
7- အစုလိုက်အတွက် ထုတ်လုပ်မှု အချိန်တို။
8: အဆင့်မြင့်စက်ကိရိယာများ၊ မြင့်မားသောကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၊ တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့် ISO လက်မှတ်ကိုအောင်မြင်ပြီးဖြစ်သည်။
T/T 30% စပေါ်ငွေနှင့် B/L မိတ္တူနှင့်လက်ကျန်။
ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှု နည်းပါးပြီး အမြန်ပို့ဆောင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံးရရှိနိုင်သော ပို့ဆောင်မှုကို ရွေးချယ်ပါသည် (DHL / UPS / FedEx/ စသည်ဖြင့်၊ လေကြောင်း သို့မဟုတ် ရေကြောင်းဖြင့်) ကျွန်ုပ်တို့ ကုန်ပစ္စည်းများ ထွက်ခွာပြီးသည်နှင့် သင့်အား ခြေရာခံခြင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပေးပါမည်။
Ningbo Hanvos Qiee Auto Parts Corporation တွင် ပြီးပြည့်စုံသော အရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် နှင့် ခိုင်မာသော ထုတ်ကုန် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စွမ်းရည် ရှိသည်။ကုမ္ပဏီသည် လက်ရှိတွင် ဘီးအမျိုးပေါင်း 300 ကျော်ရှိပြီး တရုတ်နိုင်ငံတွင် လူစီးကားအလူမီနီယမ်ဘီးများ အများဆုံးထုတ်လုပ်သည့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာရန် ကတိပြုထားသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ဘီးများကို အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ ရုရှား၊ အီတလီ၊ တောင်အာဖရိက၊ သြစတြေးလျနှင့် အခြား 10 နိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ပြီး ရာနှင့်ချီသော ဖောက်သည်များနှင့် ရေရှည်တည်ငြိမ်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဆက်ဆံရေးကို ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။
ကုမ္ပဏီသည် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုပေါင်းစပ်မှုဖြင့် အလူမီနီယံအလွိုင်းဘီးအတုနှင့် သတ္တုစပ်ပုံသွင်းသည့်စက်ရုံကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ကုမ္ပဏီတွင် ခေတ်မီသော ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စီမံဆောင်ရွက်သည့် စက်ကိရိယာများနှင့် စမ်းသပ်ကိရိယာများစွာရှိသည်။ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပန်းချီလိုင်းနှစ်ခု၊ စက်ကိရိယာ ဆယ်စုံရှိသည်။အလူမီနီယံအလွိုင်းဘီး၏ အမြင့်ဆုံးအရွယ်အစားမှာ 24 လက်မဖြစ်ပြီး အနိမ့်ဆုံးအရွယ်အစားမှာ 14 လက်မဖြစ်ပြီး လစဉ်ထုတ်အားမှာ 50000 ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဝန်ထမ်း 300 ကျော်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်း 50 ကျော်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုကို အားကောင်းသော စွမ်းရည်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
ယခင်- တရုတ်လက်ကားဘီးအတုများ - အရည်အသွေးမြင့် 18-24 လက်မအလွိုင်းကားအလွိုင်းဘီးများကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ - Hanvos
နောက်တစ်ခု: အလေးချိန်ပေါ့ပါးသော အလူမီနီယမ်ဘီး၊ အလင်းဘီး၊ Light Aliminum Wheel
18-22 လက်မ စိတ်ကြိုက် အလူမီနီယမ် ကားအလွိုင်း...
အလူမီနီယံအလွိုင်းဘီး သို့မဟုတ် အတုပြုလုပ်ထားသော အထူးအရည်အသွေး